Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde Robots ugbu a na ụlọ ọrụ China
Akụkọ ọhụrụ Robotics World Robotics 2021 nke International Federation of Robotics (IFR) gosipụtara na-egosi ndekọ nke robots ụlọ ọrụ 943,000 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ China taa - mmụba nke 21%. Ahịa nke robots ọhụrụ toro nke ọma site na ihe dị ka nkeji 168,000 ebugara na 2020. Nke a bụ 20% karịa ma e jiri ya tụnyere 2019 yana ọnụ ahịa kachasị elu edekọtụrụla maka otu obodo.
Milton Guerry, Onye isi oche nke International Federation of Robotics kwuru, "akụ na ụba dị na North America, Eshia na Europe ahụtaghị ọnụ ala Covid-19 ha n'otu oge." "Nri oriri na mmepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China malitere ịmalite na nkeji nke abụọ nke 2020. Akụ na ụba North America malitere ịgbake na ọkara nke abụọ nke 2020, Europe sochirikwa obere oge."
Ndị na-emepụta roboti China na-ebutekarị ahịa ụlọ, ebe ha nwere oke ahịa nke 27% na 2020 (nkeji 45,000). Nke a nwere na ụfọdụ mgbanwe na-adịgide adịgide n'ime afọ 8 gara aga. Na 2020, nrụnye nke robots si mba ọzọ - gụnyere nkeji nke ndị na-abụghị ndị China na-ebupụta na China - toro nke ọma site na 24% ruo nkeji 123,000 na 2020 yana ngụkọta ahịa nke 73%.
A na-atụ anya na nrụnye robot zuru ụwa ọnụ ga-agbake ike ma na-eto site na 13% ruo 435,000 nkeji na 2021, si otú ahụ gafere ọkwa ndekọ e nwetara na 2018. A na-atụ anya na ntinye na North America ga-abawanye site na 17% ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 43,000 nkeji. A na-atụ anya na nrụnye na Europe ga-eto site na 8% ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji 73,000. A na-atụ anya nrụnye robot n'Eshia gafere akara nkeji 300,000 wee tinye 15% na nsonaazụ afọ gara aga.